Tag: fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy | Martech Zone
Tag: fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy
Scup: Fanaraha-maso ny media sosialy, famakafakana ary firotsahana
Asabotsy, Aogositra 17, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Scoop voatonona Scup - nanomboka tany Brezila ary ankehitriny manohana ny Anglisy, Portiogey ary Espaniola. Ho an'ny orinasa sy ny maso ivoho, Scup dia manana ny mampiavaka azy rehetra amin'ny sehatra fanaraha-maso, famoahana ary famakafakana media sosialy tena izy. Scup dia fitaovana fanaraha-maso media sosialy lehibe ary ampiasain'ny matihanina mihoatra ny 22. Manampy ireo mpitantana media sosialy i Scup amin'ny alàlan'ny sangan'izy ireo manomboka amin'ny fandefasana ka hatramin'ny famakafakana, mampitombo ny fahombiazany. Manara-maso ny haino aman-jery sosialy ny endri-javatra sy ny tombontsoa azony
NetBase: Sehatra fitsikilovana sosialy ho an'ny orinasa
Alahady, Jolay 22, 2012 Alarobia 6, 2014 Douglas Karr
NetBase, Accelovation teo aloha, dia sehatra fitsikilovana sosialy orinasa ahafahan'ny mpikaroka tsena mandrefy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny media sosialy. Ny Net Base Monitoring Platform dia manome hery ireo mpivarotra amin'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy ary fitaovana fandrefesana izay manome fahitana eo noho eo sy eo amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra manosika ny hevitry ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany. Ny NetBase Insight Workbench dia manome ny mpikaroka ao an-tsena andiana analytics, tabilao ary fitaovana fikarohana. Ity misy ohatra iray amin'ny Netbase's BrandPassion Index, ampiasaina hamaritana ny fifaninanana fifaninanana a